လုပ်ငန်းရှင်ဝါဒ (အမှတ် ၆ မှ ၁၀ အထိ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » လုပ်ငန်းရှင်ဝါဒ (အမှတ် ၆ မှ ၁၀ အထိ)
လုပ်ငန်းရှင်ဝါဒ (အမှတ် ၆ မှ ၁၀ အထိ)
Posted by asiamasters on Mar 28, 2013 in Think Tank |5comments
၆။ ကောင်းသောအကြောင်းအရာမဟုတ်သော်လည်း လူသားများနှင့် အမြဲထိတွေ့ နေရ သည့် ကိစ္စတစ်ခုမှာ “အကြွေး” ဖြစ်သည်။ အကြွေးဟူ၍ကြားလိုက်သည်နှင့် မင်္ဂလာမဲ့ သွားသည်ဟုခံစားကြရသည်။ သို့သော်လူသားတို့သည် အကြွေးနှင့်ကင်းသည်ဟူ၍မရှိပါ။ အကြွေးကို ကြောက်ရန်မလိုပါ။ သူ့ကြွေး ရှိသည်များကို ဆပ်ရမည်သာဖြစ်သည်။ အကြွေးဟုပြောလိုက်လျှင်ကပ်ပါလာသည်မှာ ” အတိုး” ဖြစ်သည်။ အကြွေး ယူလိုက်သော ငွေသည် ပြန်ဆပ်ရန်အတွက်သာရည်ရွယ်ထားရမည်။ အတိုးနှုံးကြီးမားသော ချေးငွေများကို မချေးခင်ကတည်းက သတိထားရမည်။ လုပ်ငန်းလုပ်လျှင်၊ တိုးချဲ့လျှင် ငွေလိုပါက ချေးရသည်။ အတိုးထဲတွင်နစ်မွန်းသွားနိုင်မည့် အခြေအနေမျိုးကို သိထားရမည်။ ငွေချေး၍ သုံးဖြုံးပစ်လိုက်လျှင်ကား ကုရာနတ္ထိဖြစ်ပြီး ဒုက္ခပင်လယ်ဝေမည်။
၇။ လူသားတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးခြင်း၊၊ မိသားစုများပြိုကွဲခြင်း၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများပျက်ခြင်း၊ ဘ၀ပျက်ခြင်းများကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ခုကတော့ လောင်းကစားခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အပျော်အပျက်ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် လောင်းကစားခြင်းကို မလုပ်ပါနှင့်။ သို့သော် လောင်းကစားခြင်းနဲ့ လူသားတွေက တွဲပါလာတာဖြစ်တယ်။ လောင်းကစားခြင်းဆိုတာက မိမိသေသေချာချာမသိတဲ့ကိစ္စမျိုးကို စွန့်စားမှုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ မိမိဘက်မှ မဆုံးရှုံးအောင် အဖက်ဖက်မှ တွက်ချက်ပြီးမှ သာစွန့်စားမှုမျိုးပြုလုပ်သင့်တယ်။ လောင်းကစားလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရက ဦးစီးပြီးလုပ်ရမယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ချင်းစီကို လောင်းကစားလုပ်ခွင့်မပြုရ။
၈။ အမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေသူမျုားမှလွဲ၍ မည်သူ့ကိုမျှအလကားမပေးသင့်။ အလကားမကျွေးသင့်။ အလကားပေးခြင်း၊ အလကားလိုချင်ချင်းတို့သည် လူတို့၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ကျဆင်းသွားစေသည်။ အလကားပေးလျှင် တန်ဖိုးကို နားမလည်နိုင်၍ အကောင်းမဖြစ်ယုံမက၊ မိမိ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖြုန်းတီးရာရောက်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတို့သည် အစဉ်အဆက်သာတိုးပွားနေရမည်။
၉။ မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆို အချက်အချာကျသည့်နေရာသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အချက်အချာကျသည့် နေရာများတွင်နေထိုင်နိုင်အောင်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လုပ်ရမည်။ အချက်အချာကျသည့်နေရာများသည် မြို့ရွာတို့၏အလယ်လူစည်ကားသောနေရာများ၊ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သည့်နေရာများ၊ ဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးရာ ဗဟိုများဖြစ်သည်။ လူသားတို့နှင့်ဝေးရာတွင်နေသူတို့သည် အရောင်းအ၀ယ်မဖြစ်ခြင်း၊ ၀င်ငွေမရှိခြင်း၊ အသိဥာဏ်နဲခြင်းအစရှိသည့် ဆင်းရဲဒုက္ခတို့နှင့်သာ ကြုံတွေ့ကြရသည်။ အချက်အချာကျသည့် အလယ်ဗဟိုနေရာများတွင် ချေကုတ်ယူပါ။
၁၀။ လူသားတစ်ဦးအတွက် ၀တ်စားဆင်ယဉ်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ မိမိသွားမည့်နေရာ၊ ရာသီဥတု၊ တွေဆုံရမည့်သူတို့နှင့် လိုက်လျှောညီထွေဖြစ်မည့် အ၀တ်အစားကို သန့်ရှင်းသန့်ယပ်စွာဝတ်စားဆင်ယဉ်တတ်ရန်လိုသည်။ ရှိသလိုဝတ်၊ ဖြစ်သလိုဝတ်သူများကို မည်သူမျှ လေးစားလိမ့်မည်မဟုတ်။ အမြဲတစေ အရှုံးနှင့်သာရင်ဆိုင်ရမည်။ သင့်လျှော်သည့်အ၀တ်အစားကို သန့်ရှင်းသန့်ယပ်စွာဝတ်ထားသူတို့သည် တွေ့ဆုံသူတိုင်း၏ လေးစားယုံကြည်မှုကိုရရှိကြ၍ အောင်မြင်သူများဖြစ်လာသည်။
၉။ နေရာ အနေအထား နဲ့
ပျမ်းမျှ …ထောက်ခံပါတယ်ဆြာရေ …
သို့သော်.. ၇ မှာ ပါတဲ့
လောင်းကစားလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရက ဦးစီးပြီးလုပ်ရမယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ချင်းစီကို လောင်းကစားလုပ်ခွင့်မပြုရ။
အဲ့ဒါလေးတော့ ငြင်းပါရဇီ ကိုယ့်ဆြာရေ…။
အစိုးရက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထုတ် .. အခွန်စည်းကျပ် အာမခံသဘောမျိုး ငွေကြေးတစုံတရာယူပြီး
ပုဂ္ဂလိက ကို လောင်းကစား လိုင်စင် ချထားပေးရမှာ ဗျ..ထီလိုဟာမျိုးတော့ လုပ်ချင်လုပ်ပေါ့ …သို့သော်..
ရှိသမျှ အစိုးရ ဒိုင်ကိုင်နေလို့ ဖြစ်မလား … နိုင်ငံတကာမှာလည်း မြင်းပွဲ အစ ကာစီနို အလယ် ဘောပွဲအဆုံး
P.S ကျနော်သည် လောင်းကစားသမား မဟုတ်ပါ။
ဦးစီးတယ်ဆိုတာက Leading and monitoring ကိုဆိုလိုပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်တာကိုပြောတောမဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရကိုယ်တိုင်လုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ ဥပမာ၊ အောင်ဘာလေ ထီလိုပေါ့.
Oh.. if so.. Agreed !!
အမေရိကန်တွေများ.. တော်တော်ကို အကြွေးထူပြီး.. အကြွေးဝါသနာပါတာ..
ပညာတော့ တော်တော်ပါတယ်..။ စက္ကူတွေရိုက်..။ ဒေါ်လာအမည်တပ်..။ အစိုးရဘွန်းတွေထုတ်..။ ဒေါ်လာသန်းချီအမည်ရိုက်..။ ချိုင်းနားကိုရောင်း..။ ချိုင်းနားကိုအတိုးပေး..။
ရတဲ့ဓေါ်လာငွေခေါ်သည်ဆိုသောအရာတွေနဲ့.. အရှေ့အလယ်ပိုင်းက.. ရေနံတွေဝယ်..။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေ. ပဋိပက္ခနဲ့တင်းမာအောင်လုပ်..။ လက်နက်တွေပြန်ရောင်း..
ဒါပေမယ့်.. ဒီအကြွေးတွေကပဲ.. လူနေမှုဘ၀တွေနဲ့.. အလုပ်အကိုင်တွေလုပ်ဖြစ်အောင်.. လှည့်ပါတ်စေတာပါပဲ..။
ရေရှည်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးမှာတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိကျွမ်းကြပြီးသား၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို သိပြီးသားဖြစ်လေတော့ အ၀တ်အစားက သိပ်အရေးမပါဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။
လူမှန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စွပ်ကျယ်ဂျိုင်းပြတ်ဝတ်ပြီး ရောင်းဝယ်နေလည်း ဘယ်သူမှ အထင်သေးမှာ မဟုတ်သလို…..
အ၀တ်အစား (အဆောင်အယောင်) ကို အယောင်ပြပြီး လိမ်လည်လှည်ဖျားဖို့ ကြံတတ်သူတွေလည်း ရှိတတ်တာမို့….